Yeeroo Darbe Bareefama Namota 4 irra nu dhufe marisariitti keenya irrati maxansuun keenya ni yaadatama. Hata’uu malee Dhaabbilee fi namoon tokko tokko Basasan Girma xuruna nama ganda kanati isaan hundi basasa, qeerroo hin jiru jeechuun paltaki, website fi facebook isaan irrati uumata hunda walti qaban balalefacha jiru kun siiri miti paltak waltajii uumatii itti salphatuu fi gandan qoodamee abaramuu ta’uu hin qabu. Warii kan amoo Girma Xuruna nama 33 hisisee ragga itti ba’uu isaan nama raggan itti dhiyacha jiruu. Uumanii fi baratoon Oromoo nami kun nu fixee jira utuu jeedhan iyyatan lakii miti jeedhan Interview goodhan falmachaaf wari jiran jiru. Waltaji hunda fi paltak isaa irrati nama maqa Girma Xuruna xuqee hunda balalefachun siiri miti. Basasa Interview goote miti yoo abidan gubdee ilee ani basasa jeedhe hin dubatuu, ati dhuguma basasa jeedhan gaafi fi deebi goochufn basasa kana deeruu dha. Basasi tokko yeeroo dhaabba tokko keessati mulatuu dursan utuu hin damaaqin dhabamsisuu, ykn caasaa isaa jala jiruu diigan kan biraa ijaruu fi basasa sun mediati saxilani uummani beekee akka of egatuu goochuu dha male falmachuufn bala fida nu amana. Warii namtii tokkof jeetan saba bala hunda maqa xureesitan keessa keessa Oromoo Ganda fi Amantan adda qooduuf dhamatan of egadha. Warii nami kun basasa miti qabsa’adha jeetan ilee basasa boba jala qabachuu basasa birra jajabesuu ta’aa dhabadha. Basasi, Ogannii, dhaabbii kkf uumata Oromoo nu caaluu jirachuu hin qabu. Ibsa Qeerroon Bilisummaa Oromoo nu erge kana dubsati isinmti xinxala. (Gulaalaa)
Haala Yeroo Maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon walqabatuun adeemaa jiru ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Uummata Oromoo hundaaf Addatti Jaarmiyaalee Qabsoo Bilisummaa Oromoofi Qabsa’ootaa fi Sabboontoota Oromoo hundaaf:
Haala Yeroo ammaa maqaa Jaarmiyaa keenya Qeerroo Bilisummaa Oromoo maqaa dhahatuun marsaalee social media fi medialee garaagaraa irratti yaada qabsoo bilisummaa Oromoo fi dhimmaa basaastummaa nama Girma Xurunaa Darsee jedhamuun kan oofamaa jiru ilaalchisuun wal diddaa yaadaa sadarkaa namootaa dhunfaa irraa darbuun sadarkaa jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo gidduutti uumaa kan jiruu fi addaatti immoo adeemsaa duuchaadhumatti maqaa balleessiin Qeerroo bilisummaa Oromoo waliigalarratti ofamaa jiruu yeroo dhageenyuu baay’ee nama gaddisiisa. Gabaabadhumatti nuti ilmaan Oromoo hogganootaa fi miseensota Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan taanee fi adda dureen karooraa fi tarsimoo warraaqsaa FDG-FXG qindeessuu fi hogganuun gaggeessa turree ibsa gabaabduu armaa gadii kana uummata keenyaa hundaaf dabarsuuf dirqamnerra.
1. Waan hundaa duraa kabajni, galatni gootoota wareegamtoota ilmaan Oromoo sochii qindaa’aa fi seenaa haaraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmeesse keessatti sadarkaa lubbuu kennuu irraa hanga wareegaama waan qabsoof barbaachisuun nu cina dhaabbatanii sochii bilisummaa ofiif falmachuutti hirmachuun wareegama qaalii kanfaluun sochiin qabsoo Oromoo fakkeenyummaa qabu sadarkaa har’a irra ga’ee jiru ga’an guyyuu isaan yaadataafi galmee seenaa gootota Oromoo irratti galmeeffata; kaayyoo fi karooraa gootota keenya waliin qabnu irraa utuu hin maqiin warraaqsaa FXG marsaa 5ffaa qaqqabsiifnee jirru daran finiinsina!!
2. Dhimmii dhiyeenya social media irratti maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaa’atuun , kan hogganaa qeerroo bilisummaa Oromooti kan jedhamee Girmaa Xurunaa Darsee garlamee (double agent) mootummaa Wayyaanee fi ABO waliin hojjetu haalaa jedhuun gagga’amni qeerroo bilisummaa Oromoo fi qabsoo uummata Oromoo mudatee jiraachuu fi Girmaa Xuranaa kun qabsoo bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo gagaa’a jiraatuu eeruu fi Qeerroon bilisummaa Oromoo harka wayyaanee bu’ee jira kan jedhuu media irra naanna’a kan jiru kana yeroo dhageenyuu waan hedduutu nutti dhagaa’ame. Kanaan walqabatees rakkoon guddaan namaaf nama gidduutti, jarmiyaa fi jaarmiyaa gidduutti, sabboontotaa fi hoggantoota jaarmiyaa gidduutti , qabsaa’otaa fi qabsoo’ota gidduutti rokkoon uumamaa jira. Rakkoo jiruu hundaa kabajaa wareegamaa qaalii uummatni keenyaa nu waliin hiriiree falmateef baasaa jiruu ilaaluun obsumaan kan jirru yaada keenyaa fi dhugaa Oromoo roga keenyaan jiruu akka hubattaniif isiniif ibsuuf dirqamne.
3. Uummatni keenyaa fi Jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo, qabsaa’otni Oromoo fi sabboontootni Oromoo Caasaan hoggansa keenyaa fi nuti Qeerroon bilisummaa Oromoo karooraa fi tarsiimoo warraaqsaa qindeeffachuun FDG-FXG finiinsaa jirru, Girmaa Xurunaa fi caasaa Girmaa Xurunaa waliin hidhata tokko illee kan hin qabnee ta’uu isin hubachiifna!!
4. Nuti Warraa qabsoo bilisummaa Oromoofi caasaa jabaa ijaarrachuun warraaqsaa qindaa’aa fi bilchina qabu bara Ebla 2014 irraa eegaluu dhoosee hanga har’a bara 2016tti yeroo irraa gara yerootti biyyatti keessatti tooftaa fi dandeettii qabnuunitti fayyadamuun qabsoo bilisummaa Oromoo balaa diinaa irraa dandamachiisuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo haaressuun waanjoo gabrummaa uummata keenya irraa kaasuuf balbala bilisummaa irraa geenyee wayyaanee millaa tokkoon dhaabuun warraaqsaa FXG marsaa 5ffaa fi isa xummuraa irraa geenyee kan jirruu ta’uu isin hubachiifna!!
5. Adeemsaa Qabsoo bilisummaa Oromoof aantummaa qabaatuun, lootee galtuu fi basaastuu kanneen ergama diinaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuuf carroomte saaxiluun eeggichi cimaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka godhamuu tattafatuun hojii qabsoo keessa tokko ta’uun kan wal nama hin gaafachiifne waan ta’eef kan deeggarramudha!!
6. Rakkina uumame kana dahoo godhatuun kanneen Qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabatuuf Oromoo ta’anii akka barbadaanii fi yeroo barbaadanitti akkuma fedhii isaanii yaada dhuunfaa isaanii kan sadarkaa fi madaallii hin eeggatiin kan haamilee qabsoo fi qabsa’otaa tuqu, farraa tokkummaa ta’ee dhiyeessuun dhiiga uummata nu cina dhaabachuun mirga isaaf hiriiree falmachaa jiruun harka dhiqatuu barbaadan akka of qusatan dhaamna!!
7. Rakkoon karaa Caasaa nuti hin beeknee fi ga’ee ifaa fi muldhata ta’ee qabsoo Oromoo keessa hin qabnee muldhate kun sadarkaa tokkummaa sabaa, jaarmiyaa Qabsoo bilisummaa fi haamilee hoggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo,qabsaa’otaa, fi sabboontootaa kan tuqaa jiruu ta’uu hubachuun uummatni keenyaa fi qabsaa’otni fi sabboontootni Oromoo hundi hogganummaan qabsoon bilisummaa Oromoo nu harka jiraatuu fi abbaamaa sochii Warraaqaasaa of harkaa qabaatuu keenyaa fi maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon dargaggoota,gootota barattoota Oromoo fi uummata keenyaa sadarkaa sadarkaan ijaaruun sochii warraaqsaa FDG-FXG qindeessaa fi gaggeessa kan jirru ta’uu fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo fi mirga Uummata Oromoof falman kam irratti iyyuu danqaa(atakaroo) tokko malee qabsoo kana gaggeessa kan turree fi kan itti jirru ta’uu ni hubachiifna!!
8. Jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo fi kanneen mirga Oromoo kabachiisuuf sochii fi carraaqii qabdan rakkoo fedhe irratti iyyuu adeemsa tumsa waliif gochuu akka aadaa godhannuu fi adeemsa tuma walirratti godhuu akka dhaabbatu jala sararuun hubachiifna!!
9. Miseensotni,dargaggoonnii ,barattootni fi deeggartootni Uummatni Oromoo kan biyyaa keessa fi biyya hambaatti argamtan qajeelfamaa fi adeemsa quba walqabaatuun sochii warraaqsaa Fincila Xummuraa Gabrummaa (FXG) qindeessaa fi gaggeessuu keessatti quba wal qabachuun sadarkaa har’a qabsoon bilisummaa Oromoo irra ga’ee jiru FXG marsaa 5ffaan geenyee jirru haalaa uumamee kanaan danqamnee akka hin dhaabbanneef wal quba qabaata jirru ammas caalmatti qabsoo bilisummaa Oromoo fi sabboontoota qabsaa’ota ilmaan Oromoof eggannoo guddaa gochuun qabsoo keenyaa warraaqsa FXG marsaa 5ffaa itti jiruu jabeessuun qajeelfama walii hordofuun Warraaqsaa keenyaan kan itti fufnu ta’uu dhaammatna!!
10. Uummatni Oromoo fi qabsa’otni Oromoo,Diasporan Oromoo fi jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo addatti biyya hambaa jirtan adeemsa wal hubannaa jabeeffatuun waltaanee harka wal qabachuun fuulaa keessan gara Warraaqsaa FXGtti akka naanneeffattan isin hubachiisuun kaayyoo fi kutannoon keenyaa hanga bilisummaan saba keenyaa fi walabummaan biyya keenyaa mirkana’utti sochiin keenyaa guyyuu itti fufa!!
11. Qabsaa’otni,sabboontootni fi jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo adeemsaa gaggeessuummaa fi qindeessuummaa sochii warraaqsaa FDG-FXG kanneen addatti baroota 2014 hanga bara 2016 amma itti jirruu armaan olitti isiniif tuquuf yaallee ilaalchisuun gaaffii, ibsa wal hubannaa, qeeqaa fi yaada qabdaniif nuiti uummata keenyaa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaaruu fi jabeessuuf carraaquuf bakka guddaa qabna. Yaada nuuf dhiyaatu hundaaf mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo banaadha!!
Injifannoon Uummata Oromoof! Gadaan Gadaa Bilisummaati!!